Abahlinzeki bemikhiqizo neFektri | China Imikhiqizo Abakhiqizi
Ucingo: +86 18041030986
[Kopisha] Ibhande le-Ceramic elicindezelayo
Bobumba ibhande olwalwenza
UBrown wafaka ibhande le-alumina
Ucindezelwe isondo lesikhungo
I-Potassium fluoborate iyimpuphu emhlophe emhlophe. Incibilika kancane emanzini, i-ethanol ne-ether, kepha ayincibiliki kuzixazululo ze-alkaline. Ubuningi obuhlobene (d20) bungu-2.498. Iphuzu lokuncibilika: 530℃ (ukubola)
Njengamanje, uYousheng uphinde utshale imali entsha ekuthuthukiseni izindwangu zezimboni. Ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yomkhiqizo, isanda kutshala imali ekuphothweni kwamaringi nasekuvuleleni imishini evulekile. Inkampani'Imikhiqizo ehola phambili Iba nochungechunge oluningi: izindwangu zezimboni ezenziwa ukotini, zonke izindwangu zezimboni ze-polyester, izindwangu zezimboni ze-polyester-cotton, njll. Imikhiqizo eyinhloko ifanelekile emuva emuva kwendwangu ye-emery.
I-Cryolite yimpuphu emhlophe ekristalu. Incibilika kancane emanzini, ngobuningi bayo obungu-2.95-3.0, nendawo encibilika engaba ngu-1000 ° C. Kulula ukuncela umswakama futhi kungaqedwa ngama-acid aqinile njenge-sulfuric acid ne-hydrochloric acid ukwakha i-aluminium ehambisanayo nosawoti we-sodium.
I-Zirconium corundum incibilikiswa ekushiseni okuphezulu esithandweni sikagesi se-arc nesihlabathi se-zircon njengempahla eyinhloko eluhlaza. Inokuthungwa okunzima, isakhiwo esihlanganisiwe, amandla aphezulu nokwethuka okuhle okushisayo. Njengenkinga, ingakha amasondo wokugaya asebenza kanzima, anomphumela omuhle wokugaya ezingxenyeni zensimbi, izinsimbi zensimbi, izinsimbi ezingamelana nokushisa, nezinto zokwenziwa ezahlukahlukene; ngaphezu kwalokho, i-zirconium corundum nayo iyinto eluhlaza eluhlaza. Kuyimpahla ekahle yemibhobho yokusebenza ngokushelelayo ephezulu nemibhobho yokucwilisa. Ingasetshenziswa futhi ukwenza izitini ze-zirconium corundum zezingilazi ezincibilikisa ingilazi.
[Kopisha] I-Zirconia Alumina
Ulwelwesi lwe-ceramic lwenziwe nge-alumina ekhethekile njengempahla eyinhloko, exutshwe nezinhlobonhlobo zezinto eziguquliwe zomhlaba, futhi isetshenziselwa ukushisa okuphezulu. Inobulukhuni obuphakeme nokuzilola ngokwakho. U-Yousheng uthembele kumqondo oyingqayizivele wokugaya futhi ungeza amakhemikhali akhethekile ukwenza ulwelwesi lwe-ceramic olunezici zokusika okubandayo. Ulwelwesi lwe-ceramic lungagcina amandla okugaya ahlala isikhathi eside, ukuze amathuluzi enzelwe olwenziwayo afinyelele impilo ende kakhulu. I-abrasive inebanga lesicelo elibanzi kakhulu, elingasetshenziselwa ukusakaza nokugaya ngaphansi kwengcindezi ephezulu, nokugaya kahle izinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukugaya igiya, ukuthwala ukugaya, ukugaya i-crankshaft nokunye.
Izici zomkhiqizo: ubuchwepheshe obusha sha, ukuzilola okuhle, ukugaya okubukhali, ukumelana nokushisa okuphezulu, ubulukhuni obuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu futhi akulula ukugqoka, idayimane elifananayo nesihlabathi, ubungcweti obuhle, ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo, ukusikeka okushelelayo ngaphandle kokuqhephuka nezinye izinzuzo .
Imikhiqizo ifaneleka kakhulu: zonke izinhlobo zensimbi nezinto ezingezona ezensimbi, ukugaya insimbi ye-tungsten, ukusika imishini, ama-alloys, amadayimane, ingilazi, izitsha zobumba, izinto zokwenziwa kwe-semiconductor (i-silicon carbide, njll.), Izinto zikazibuthe (ama-cores kazibuthe, amashidi kazibuthe, ama-ferrites, njll.) nezinto zokwakha insimbi (i-alloy enzima, i-tungsten steel YG8, njll.)
[Kopisha] Isondo lokugaya idayimane laseBrazil
Izinga eliphezulu le-alumina abrasives nama-resin abrasives ayacindezelwa ashisayo.
Izici zomkhiqizo: ukuphepha komkhiqizo, ukusebenza kahle okuphezulu, ukucacisa okuphezulu, ukumelana nokuqina, okuzinzile nokuhlala isikhathi eside, ngezimpawu zokumelana nokuqina okuphezulu, ukumelana nomthelela, ukumelana nokugoba, isivinini sokugaya okusheshayo, ukugaya okubushelelezi, impilo yenkonzo ende, njll.
Umkhiqizo usetshenziselwa ikakhulukazi: ukugaya, ukususa ukugqwala, ukupholisha, ukugaya insimbi, ukugaya umthungo wokugaya, ukugoqa umthungo wokugoqa, kanye ne-surface derusting.
Idayimane ne-resin bond bayacindezelwa kakhulu ukwenza umkhiqizo.
Isondo lokugaya idayimane laseBrazil
Emkhakheni wobuchwepheshe bokucwebezelisa, uYousheng wenza amadiski amasha wokupholisha, kufaka phakathi i-sandpaper ne-velvet body, futhi la mabili ahlanganiswe futhi ahlanganiswe. Iteyipu yeVelcro esethreyini inamathiselwe ngumzimba woboya, okulula ukuhlangana futhi usebenzise. Uma kuqhathaniswa nomkhiqizo ojwayelekile wokupholisha, isici esiyinhloko sediski yesihlabathi ukuthi ingakwazi ukumunca uthuli kanye ne-powder ekhiqizwe kwinqubo yokucubungula ngesikhathi, ithuthukise ukunemba kokusebenza, futhi inciphise uthuli ne-powder ezindizayo. Ngaphandle kwalokho, inokuvikela okuhle kwemvelo. Zonke lezi zici zingayithuthukisa kahle imvelo yokusebenza.
Imikhiqizo ye-brown corundum, calcined corundum, ne-zirconium corundum louvre:
I-brown corundum, i-calcined corundum, ne-zirconium corundum louvres ziyashintshana ngamasondo wokugaya amise okwenhlaka. Banokuqina okuqinile, ukumelana okuphezulu, ukumelana nokugoba, ukuzilola okuhle, isilinganiso sokugaya okuphezulu, nomsindo ophansi. Ifanele ukupholishwa nokupholishwa kwensimbi, insimbi, insimbi engagqwali, insimbi yensimbi, i-aluminium, ukhuni, ipulasitiki nokunye okungekona okwensimbi.
Uhlobo lwe-disc yesihlabathi oluyinhlanganisela enobungani bemvelo 28:
Idiski yediski eyindayo ehlanganisa imvelo yenziwe ngamalambu akhethekile we-emery aboshelwe kwi-substrate enobungani bemvelo. I-disc eyi-SG evikela imvelo (eluhlaza okotshani) ibonakala ngokuphepha okuphezulu nokuguquguquka okuhle; indwangu ye-emery ne-substrate zombili zilungele imvelo. Okokusebenza kusetshenziselwa ukupholisha izigaxa zokushisela nezindawo zokupenda zemikhumbi, izimoto nezindiza.
Tianjin Yousheng Ukuhweba Co., Ltd.